Nigeria Tourism and Transportation Summit: An event of Death? | Breaking Travel News
Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » INgqungquthela yoKhenketho nezoThutho eNigeria: Umsitho wokufa
INgqungquthela yoKhenketho nezoThutho eNigeria: Umsitho wokufa
Amashishini noorhulumente ngoku kunakuqala bafuna ukuphazamiseka ekucingeni, kwiingcebiso nakumava okuhamba kule ngxaki, utshilo owayesakuba nguMphathiswa Wezokhenketho eZimbabwe uGqirha Walter Mzembi oselubhacweni eMzantsi Afrika.
Ukuba iNigeria inengxelo echanekileyo kukho iimeko ezi-2 kuphela zeCoronavirus kweli lizwe.
Kungoko kuyaphazamisa ukubona, ukuba umququzeleli weNgqungquthela yezoThutho kwezoKhenketho ane-Expo usenezicwangciso ezinkulu kwaye utsala abathathi-nxaxheba kumnyhadala wabo kwiZiko leNkomfa yaMazwe ngaMazwe kwidolophu elikomkhulu laseNigeria i-Abuja.
Le nkomfa icwangciselwe u-Epreli 27 nowama-28 kwaye iinkcukacha zingafumaneka ngomhla wokuqala www.zintoks.com
Ukuhamba kwesiXeko, iGala kunye nobusuku bomvuzo noHilton ukuze ube ngomnye wabaphumeleleyo konke kucwangcisiwe. Kungalindeleka ukuba inani le-2 COVID-19 eNigeria liza kunyuka ngaphakathi kweeveki ezi-2 emva kwale nkomfa, kodwa umququzeleli ufuna ukuba umboniso uqhubeke, ngaphandle kwesoyikiso se-COVID-19 kuyo yonke indawo emhlabeni.
Ugqirha Mzembi ucacisile: Yiyo kanye le nto isasaza iCoronavirus okwangoku. Ke le Nkomfa inokuthi ingahambelani nemeko yangoku yesifo sehlabathi.
Iindawo zokunxibelelana kwihlabathi liphela ziyivelitha kuzo kwaye ezona ndawo zichaphazelekileyo / amazwe namhlanje yeyona irisiti inkulu ehlabathini okanye kwimarike yemithombo yezokhenketho.
Isisombululo asikho ekujongeni le miba iphindaphindayo yemixholo ekuvulekeni kwendawo ekunxityelelanwa kuyo kunye nokunxibelelana kodwa ekunqumamiseni uhambo nokhenketho; isiseko sethutyana sohlobo.
Ke abathathi-nxaxheba kwezoKhenketho noKhenketho kufanelekile ukuba bacinge ngamanyathelo okuphucula ukugcina eli shishini liqhuba ngohlobo lokhathalelo nolondolozo kwaye bavumele eli nqanaba ukuba lidlule njengoko kuya kuba njalo. Oorhulumente baye basenga uKhenketho noKhenketho amashumi eminyaka lixesha lokuba bajonge eli Shishini kunye neemfuno zalo zononophelo.
Icandelo ngokwalo kunye nolwandiso lukarhulumente kufuneka liqale ukuphonononga ngokunyanisekileyo izisombululo zokwenyani zeemveliso ezinjengeNkomfa kunye neMiboniso eziyimodus kunye nezixhobo zentengiselwano. Indlela yesiko yokuqokelela kwintengiselwano iphazamisekile ngaphambi kwexesha kunye nokukhaba kwitekhnoloji. Imisebenzi ekude kunye nokuthatha ikhefu elingahlawulelwayo kuyakugcina ushishino luqhubeka ixesha elilinganiselweyo kodwa ungenelelo ngononophelo olungaphaya lwezemali, ukunciphisa irhafu kunye neenkuthazo kufuneka zijongwe kwangoko.
Kule ndawo iarhente yoorhulumente efana ne-UNWTO kufuneka ibeke indlela yayo yokucinga kwaye icebise oorhulumente abaninzi abangenalwazi ngendlela yokulenza ukuba icandelo livuseleleke ngexesha elifanelekileyo.
Uninzi lwezokhenketho lwehlabathi kunye nemibutho yezorhwebo, kunye noorhulumente babongoza abaququzeleli bemisitho kunye neentlanganiso ukuba bawurhoxise lo msitho kwaye bangajongi inzuzo yexesha elifutshane, enokuba yintlekele eNigeria nangabathunywa bamazwe aphesheya kwiindawo ezininzi zaseAfrika.
Isalathiso kuthethwano lokhuselo lokuhamba lwehlabathi ukhuseleko.com